ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးလွန်ကဲဆွဲဆောင်မှုများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးလွန်ကဲဆွဲဆောင်မှုများ
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 26/09/2020)
ဥရောပတိုက်တွင်အစွန်းရောက်ဆွဲဆောင်မှုမရှိရှားပါးမှုရှိပါတယ်. Adrenaline ရှာဖွေနေသူများနှင့်အစွန်းရောက်အားကစားလုပ်နိုင်တဲ့၏မိတ်ဆွေတို့ကို အတှေ့အကွုံ အမျိုးမျိုးသောဥရောပ ခရီးစဉ် လှုပ်ရှားမှုများကျယ်ပြန့်နှင့်အတူ. သငျသညျရှိရရန်မည်သို့အံ့သြနေပါလျှင် ရထားနဲ့, သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုဖုံးအုပျပါပြီ, လွန်း! ဤတွင်ဥရောပအကောင်းဆုံးအစွန်းရောက်ဆွဲဆောင်မှုဘို့ငါတို့ထိပ်တန်းကရွေးခြယ်များမှာ:
ဥရောပအကောင်းဆုံးလွန်ကဲဆွဲဆောင်မှုများ – Innsbruck ရှိ, သြစတြီးယား
တစ်ဦး adrenaline လောင်စာနေ့ရက်သည်, အတွက် Innsbruck ရှိထက်မထပ်မံကြည့်ရှု သြစတြီးယား. လုပ်ဖို့အရာပဒေသာရှိပါတယ်, သငျသညျပဿဒ္ဓိသို့မဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုရှာနေရှိမရှိ. အမြားအပွားနေချိန်တွင် ခရီးသွားဧည့် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ idyllic အသွင်အပြင်၏တိကျစွာ Innsbruck ရှိသွားပါ, ကကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုအများကြီးပိုရှိပါတယ်. သငျသညျ Olympiaworld မှာ bobsleigh စီးနင်းတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်, ချွတ်ခုန်တဲ့ကြိုးယူ europabrücke သို့မဟုတ်သွားရ နှင်းလျှောစီး. သဘာဝတရားရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာဖြစ်ပါသည်, ပြီးနောက် အမြင်များအံ့သြဖွယ်ရှိပါတယ်. သငျသညျ Innsbruck ရှိမှာလုပ်ဖို့ကိုရှေးခယျြဘာပဲ, တဦးတည်းအရာသေချာရဲ့ - သင်ပျင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ. တဖန်သင်တို့ကိုအလွယ်တကူရထားဖြင့်ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်. ဒါဟာသြစတြီးယားနှင့်အခြားအဓိက၏ကျန်ချိတ်ဆက် ဥရောပရထားလမ်းအချက်အချာ.
မြူးနစ် Innsbruck ရှိမှရထား
Innsbruck ရှိမီးရထားမှ Oberstdorf
Innsbruck ရှိမီးရထားမှ Graz
Interlaken အတွက်အစွန်းရောက်ဆွဲဆောင်မှုများ, ဆွစ်ဇာလန်
ဆွစ်ဇာလန် သင်ဘာသာရပ်ဥရောပအတွက်အကောင်းဆုံးလွန်ကဲဆွဲဆောင်မှုအခါစဉ်းစားပထမဦးဆုံးတိုင်းပြည်မဖြစ်စေခြင်းငှါ,. သို့သျောလညျး, ပထမဦးဆုံးပွဲဆက်ဆက်အထင်အမြင်မှားစေနိုင်ပါတယ်. Interlaken ဥရောပ၌အစွန်းရောက်အားကစားများအတွက်ချုပ်ဟော့စပေါ့တဦးဖြစ်စဉ်းစားသည်. တစ်ဦး adrenaline ရှာဖွေသူ၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းကျေနပ်မှအပြည့်အဝတပ်ဆင်ထားလှပတဲ့ဒေသဒါဟာင်. Interlaken အတွက်လှုပ်ရှားမှုများအချို့သည် paragliding နေကြတယ်, အပျော်ဖောင်စီးခြင်း, ကြိုးခုန်, နှင့် canyoning. ဆွစ်ဇာလန်သို့ရောက်ရှိ ဖြစ် လက်လှမ်း ရထားနဲ့, ရှိပါတယ်အဖြစ် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှလမ်းကြောင်းများ ဥရောပနှင့်မြို့ကြီးများ.
Interlaken ရထားမှ Bern
Lucerne Interlaken မှရထား
ဇူးရစ် Interlaken မှရထား
သည် Le Marche မှာဆွဲဆောင်မှု, အီတလီ
အရှေ့ပိုင်းအီတလီ အများအားဖြင့်က၎င်း၏အနုပညာကိုလူသိများသည်, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အချက်အပြုတ်အံ့ဘွယ်သောအမှု. နေဆဲ, ဒီဂုဏ်သတင်းကိုတခြားဘာမျှမဒီလှပတဲ့ဒေသရှိမယ့်မဆိုလိုပါ. le Marche ကျော်ကြား တဦးတည်းထူးခြားတဲ့နှင့်မမျှော်လင့်ဘဲအကြောင်းပြချက်များအတွက်. သင်တစ်ဦးထဲကခုန်တဲ့အခါမှာဒါဟာအကြီးအကြည့် လေယာဉ်ပျံ အဲဒါကိုကျော်ပြီး. အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားလေထီးခုန်ဒီကိုသိ, ဒါပေမယ့်သည် Le Marche မှာလည်းဥရောပတိုက်တွင်ပြင်းထန်သောဆွဲဆောင်မှုများထွက်ကြိုးစားရန်နေရာကောင်းတခုဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အ skydiving. ဤသူသည်သင်တို့မှစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အသံပါလျှင်, သငျသညျသာယာသောယူနိုင်ပါသည်, သာယာလှပရထား သည် Le Marche မှအီတလီမှတဆင့်စီး.
Florence Macerata မှရထား
Florence Jesi မှရထား
Mont Blanc မှာပြင်းထန်သော
ဥရောပသားအပေါင်းတို့အတွက်အမြင့်ဆုံးအထွတ်အထိပ်အဖြစ်, Mont Blanc အမြဲဧည့်သည်၎င်း၏မျှတသောဝေစုဆွဲဆောင်ခဲ့သည်. ထိပ်သီးအစည်းအဝေးဖို့တောင်တက်စိတျနှလုံးအမောများအတွက်မဟုတ်ပါ, တစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားရှာကြံခရီးသွားဧည့်ဤမျှလောက်ကကိုချစ်ဘာကြောင့်အရာဖြစ်ပါသည်. Mont Blanc စွန့်စားမှုကတိပေးထားတယ်, သိသိသာသာနဲ့ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာရှုခင်း, ထိုသို့လူတိုင်းမဖြည့်ဆည်းပေးနိုငျတဲ့စိန်ခေါ်မှု. ယင်း ပြီးပြည့်စုံတဲ့အားလပ်ရက် ဥရောပတိုက်တွင်အစွန်းရောက်ဆွဲဆောင်မှုအဘို့ရှာကြသည်သောသူတို့အဘို့ရာအရပ်ကို. တဖန်သင်တို့တောင်တက်များအတွက်ခံစားချက်ထဲမှာမနေလျှင်, သင်ဆဲလေထီးစီးခြင်းမှတဆင့် Mont Blanc တွေ့ကြုံခံစားနိုင်. တစ်နည်းအားဖြင့်, ဒေသတွင်း၌လူကြိုက်များသောအများကြီးပဲ့ထိန်းခြေကျင်တောင်တက်ခရီးကြမ်းတစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦးရေခဲမြစ်စူးစမ်း. သငျသညျခွငျးအားဖွငျ့ Chamonix မြို့ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် ထို့နောက်မီးရထားနှင့်ခရီးသွားလာမှု အဆိုပါ Mont Blanc Express ကိုသင်္ဘော Mont Blanc မှ.
ဤအလွန်ကဲဆွဲဆောင်မှုထက်မနောက်ထပ်မကွညျ့. ဤတည်နေရာအားလုံးရထားအလွယ်တကူများမှာ, သင်ပြုသမျှအားလုံးသည်ဖြစ်ပါသည် သင့်ရဲ့လက်မှတ်တွေကိုဘွတ်ကင်လုပ်ရန် နှင့်သင့်ခရီးစဉ်စီစဉ်!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ ဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး, သို့မဟုတ်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-extreme-attractions-in-europe%2F- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml သငျတို့သ / က de သို့မဟုတ် / fr နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့ / ကပြောင်းလဲနိုင်သည်.
#အစွန်းရောက် #traveleurope စွန့်စားခန်း europetravel Tranride ရထားခရီးသွား travelaustria travelswitzerland
အကောင်းဆုံးစျေးပေါတဲ့ရထားလက်မှတ်တွေဥရောပ Find ရန်ကဘယ်လို
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ရထားခရီးသွားဒိန်းမတ်, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား
ရထားခရီးစဉ်ကိုလမ်းခရီးစဉ်ထက် သာ. ကောင်းသောအဘယျကွောငျ့